सलोट छ शाहलाई ! कोरोना फैलिरहेको विषम परिस्थितिमाअभिनेता पल शाहले चाले यस्तो कदम -
सलोट छ शाहलाई ! कोरोना फैलिरहेको विषम परिस्थितिमाअभिनेता पल शाहले चाले यस्तो कदम
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा बिश्व ब्यापी फैलिएको कोरोना संक्रमित बढीरहेका बेला नायक तथा समाजसेवी पल शाहले एक कदम चालेका छन् । कोरोना संक्रमित भएर अक्सिजनको अभावमा जोखिममा परेकाहरुलाई बचाउन अभिनेता पल शाहले अभियान सुरु गरेका छन् ।अभिनेता पल शाहले उनले अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको ज्यान बचाउन अभियान सुरु गरेका छन् । “आर्थिक अभाबको कारण अक्सिजन नपाएर कुनै पनि निम्न बर्गका नेपालीहरुले ज्यान गुमाउन नपराेस भनेर निशुल्क अक्सिजन सेवाका लागि हामि तयारीमा छाै । यो विषम परिस्थितिमा निम्नस्तरका व्यक्तिले उपचार नपाएर अनि खानाको अभाबमा बेवारिसे भएर मर्न नपरोस भन्ने उद्देशले हामि सदैब हजुरहरुकै सेवामा छौ । अभिनेता शाहलेसमस्यामा पर्दा सम्पर्कको लागि ९८५१०५४२८०,९७४१७१०४९३,९८५११०२६५२,९८५११०२६५३,९८५११०२६५४ नम्बर समेत सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन ।”
शाहले अक्सिन सिलिण्डरको अभाव कम गर्नका लागि अभियान सुरू गरेको बताएका छन् । अक्सिजन नपाएर समस्यामा परेका अस्पतालहरुलाई २, ३ दिनभित्रै सहयोग पुग्नेगरी काम थालेको उनले जानकारी दिएका छन् । अभिनेता शाह यस्ता विपत्तीमा सहयोग गर्दै आएका छन् । अघिल्लो पटकको महामारीमा पनि समस्यामा परेकाहरुलाई घर घरमै पुगेर सहयोग गरेका थिए । आर्थिक रुपले विपन्न र लकडाउनका कारण खानै नपाएकाहरुलाई उनले राहत दिएका थिए । यो पटक भने संक्रमितलाई सहयोग गर्ने उनले बताएका छन् ।
‘अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोगका लागि हामी अक्सिजन सिलिण्डर जम्मा गर्दैछौं। उनले अक्सिजन पाएको भएपनि सिलिण्डर नपाएकाले त्यसको खोजी थालेको बताएका छन् । आफ्नो समुहले थन्किएका सिलिण्डर जम्मा गर्ने अभियान सुरु गरेको बताएका छन् । उनीहरुले विभिन्न संघ संस्थासंग मिलेर अक्सिजन किनेर अस्पतालहरुमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । केही सिलिण्डर किनिसकेको भन्दै शाहले दुई तीन दिनदेखि नै वितरण सुरू गर्ने बताए। अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर अक्सिजन सिलिण्डर वितरण गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
Previous लमजुङमा ७ बर्षिय बालकको विभत्स ह त्या,यिनै हुन् ह,त्यारा फूलमाया कामी,यस्तो छ नालीबेली
Next भण्डारी परिवारमा रुवाबासी ! जिप दुर्घ,टना हुदाँ ५ जनाको मृ,त्यु